Akekho ofuna ukusala ngaphandle ngezethulo – Ubukhosi
Home/ Ubukhosi noMhlaba/Akekho ofuna ukusala ngaphandle ngezethulo
Wonke umuntu ufuna ukuba nezwi kulezi zithangami ngokuchitshiyelwa koMthethosisekelo
ITHIMBA leKomidi Elibuyekeza UMthethosisekelo Elihlanganisiwe seliqedile ngesithangami somphakathi eLimpopo lifuna ukuba kuchitshiyelwe iSigaba 25 soMthethosisekelo. Ukuhlaziywa kwezindawo ezine ezibhekiwe kuveza ukuthi isithangami sibe yimpumelelo.
Ithimba lihambele eMarble Hall, eMokopane, eTzaneen naseThohoyandou labamba izithangami usuku lonke. Yize udaba lomhlaba luvusa uhlevane izithangami zihambe kahle kwaba nokuphazamiseka okungatheni. “Eziqutshini lapho kube nokuphazamiseka khona amalungu ethimba akwazile ukudambisa isimo ebambisene ukuze kuqhubeke izithangami,” kuho uMnu uVincent Smith, omunye wozihlalo zeKomidi.
Ukuhanjelwa kwalezi zithangami,eLimpopo, ngamalungu omphakathi bekujabulisa futhi ikomidi liyethemba ukuthi nakwezinye izifundazwe koba ngesifanayo. Ithimba liyaxolisa ngokusebenzela ezindaweni ezimumatha umthamo omncane lokhu kube ngenxa yokuthi kufike abantu abangaphezu kwalabo abebelindelekile okwenze amahholo agcwala aphuphuma kwadinga ukuba kuhlelelwe abangakwazanga ukungena kuzo zozine izindawo ebezihanjelwe. “Egameni lePhalamende, ngidlulisa ukubonga kubantu baseLimpopo ngokuphuma ngobuningi babo ukuzophonsa itshe esivivaneni kulolu daba olumqoka kangaka lomhlaba,” kugcizelela uMnu uSmith.
Izingangqo lezethulo beliphezulu kakhulu osekwenza kulindeleke izinga elithe thuthu kwezinye izifundazwe. Ithimba lihlale lisho ukuthi lokhu akusiyo inhlolovo lapho kubhekwa ukuthi bangaki abahamisana noma abangahambisani nokuchitshiyelwa. Okusemqoka izingangqo lezethulo ezibekiwe isifundazwe iLimpopo sibeke amaphuzu asemqoka okufanele iKomidi liwabhekisise bese lininga ngawo.
Labo abavumelana nokuchitshiyelwa kweSigaba 25 izethulo zabo bezigxile esidingweni sokuba kulungiswe isikhathi sokuphucwa ngokobukoloni nangokokubandlululana. Okwesibili, ukukholelwa okugxilile okuthi umhlaba uyikho konke enkululekweni yomnotho kubantu abaningi boHlanga abahaqwe ububha baseNingizimu Afrika kwethuliwe.
Okwesithathu, abantu bagcizelele ukuthi abangenamhlaba okungowabo banamakhono amangalisayo okwenza umhlaba ukhiqize uma nje bengawuthola.
Labo abaphikisa isichibiyelo baveze ukukhathazeka kwabo emtheleleni ongaba khona ekusimameni komnotho wezwe uma lesi Sigaba sichitshiyelwa. Lokhu bakusho ngoba bekholwa wukuthi ukuthathwa komhlaba kuzoxosha abatshalizimali ezweni.
Okwesibili, bathi uMthethosisekelo okhona kumanje wakuhlinzekela ukuthathwa komhlaba kodwa lokho kwabasinda abezepolitiki okwaze kwaholela ekutheni inqubo yokubuyiswa komhlaba yehluleke.
Okwesithathu, laba bakholelwa ekutheni ukuchitshiyelwa kweSigaba 25 kuzokwenza ukuba kungabi nasiqiniseko sokuhlinzeka ukudla ezweni. Ngokwalaba umbuso akufanele wengamele umhlaba futhi abantu kufanele babe namatayitela omhlaba.
IKomidi, uma seliphothule zonke izithangami zomphakathi, lizoninga ngesisindo sezethulo bese lenza izincomo zalo ukuze zipenapenwe izindlu ezinegunya, iSishayamthetho Kuzwelonke noMkhandlu Kazwelonke Wezifundazwe. Izincomo zizobe sezenziwe mhla zingama-28 kuMandulo wezi-2019.
Ithimba kusukela kusasa lizohambela esifundazweni iMpumalanga ukulalela imibono yabantu ngalolu daba. Ithimba linxusa izakhamuzi zesifundazwe ukuba zifike ngobuningi bazo ukuzozwalalisa ilaka lazo kule nkulumompikiswano.